Banaan Bax Lagu Taageeri Rabay Madaxweyne Farmaajo Oo Awood Ciidan Lagu Joojiyay | Caroog News
Banaan Bax Lagu Taageeri Rabay Madaxweyne Farmaajo Oo Awood Ciidan Lagu Joojiyay
Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta ciidamada booliiska ee magaaladaasi xoog ku joojiyeen banaan bax lagu taageerayay Madaxda sare ee dowlada federaalka Soomaaliya.
Banaan baxan oo ka bilowday qeybo kamid ah magaalada Baladweyne ayaa waxaa joojiyay ciidamada booliiska oo awood u adeegsaday dadkii banaan baxa ka qeyb qaadanayay, waxaana booliiska ciidamo badan ku daadiyeen wadooyinka muhiimka ah ee magaaladaasi.
Xildhibaan Aadan Kala Dire oo katirsan Baarlamaanka Hirshabelle qeybna ka ahaa banaan baxa magaalada ka socday ayaa sheegay in ciidamo booliis ah uu soo amray Madaxweyne Waare joojiyeen banaan baxa shacabka ku taageerayeen Madaxda dowlada.
Waxa uu sheegay Xildhibaanka in saraakiisha booliiska ku wargaliyeen in amarka lagu joojiyay banaan baxan uu ka yimid dhinaca Madaxweyne Waare, waxa uuna xildhibaanka wax laga xumaado ku tilmaamay in shacabka la caburiyo.
Dhinaca kale maamulka gobolka Hiiraan iyo taliska booliiska gobolkaasi oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa sheegay in banaan baxa maanta la dhigayay uu ahaa mid sharci daro ah aan lagu soo wargalin .
Waxa ayna sheegeen in banaan baxaasi u joojiyeen in aan lagu soo wargalin iyo sidoo kale sababo dhinaca amaanka ah, waxa ayna xuseen in magaalada Baladweyne ku jiraan gaadiid ay ku raranyihiin waxyaabaha qarxa.
Banaan baxan lagu taageeri rabay Madaxweyne Farmaajo iyo dowladiisa ee xooga lagu joojiyay ayaan la ogeyn ujeedka maamulka Hirshabelle ka leeyahay, waxaana banaan baxan oo kale horey uga dhaceen Muqdisho iyo gobolo kale.